Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Exodus 32
Nepali New Revised Version, Exodus 32
1 जब मानिसहरूले मोशालाई पर्वतबाट ओर्लन बियाँलो गरेका देखे, तब तिनीहरू हारूनकहाँ भेला भएर तिनलाई भन्‍न लागे, “उठ्‌नुहोस्‌, र हाम्रा अगिअगि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्‌, किनकि हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउने मोशालाई के भयो हामी जान्‍दैनौं”
2 हारूनले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरूका पत्‍नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्‍डलहरू फुकाली यहाँ मकहाँ ल्‍याओ।”
3 तब सबै मानिसहरूले आफ्‍ना-आफ्‍ना कानमा भएका सुनका कुण्‍डलहरू फुकालेर हारूनकहाँ ल्‍याए।
4 तिनले ती तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे, र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, “हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउने तिमीहरूका देवताहरू यी नै हुन्‌।”
5 यो देखेर हारूनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए, र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, “भोलि परमप्रभुको निम्‍ति एउटा चाड़ हुनेछ।”
6 भोलिपल्‍ट मानिसहरू बिहानै उठेर होमबलि चढ़ाए, र मेलबलि पनि ल्‍याए। तब तिनीहरू खानपान गर्नलाई बसे, अनि त्‍यसपछि मोजमा डुब्‍न उठे।
7 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “तल ओर्ली, किनकि तैंले मिश्रबाट निकालेर ल्‍याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्‍ट पारेका छन्‌।
8 तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्‌ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ, त्‍यसबाट तिनीहरू यति चाँड़ै अर्कोतिर लागेका छन्‌। तिनीहरूले आफ्‍ना निम्‍ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्‍यसैलाई पुजेका छन्‌, र त्‍यसैको निम्‍ति बलि चढ़ाएर भनेका छन्‌, ‘हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउने तिमीहरूका देवताहरू यी नै हुन्‌’।”
9 परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “मैले यी मानिसहरूलाई देखें। यिनीहरू त हठी मानिसहरू रहेछन्‌।
10 अब मलाई नरोक्‌, र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्‍किओस्‌। म यिनीहरूलाई भस्‍म पार्नेछु। अनि तँबाट नै म एउटा ठूलो जाति बनाउनेछु।”
11 तर मोशाले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई आग्रहपूर्वक भने, “हे परमप्रभु, तपाईंले आफ्‍नो ठूलो सामर्थ्‍य र शक्तिशाली हातले मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउनुभएका आफ्‍ना मानिसहरूमाथि तपाईंको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ?
12 मिश्रीहरूले किन यसो भन्‍ने मौका पाऊन्‌? ‘कुभलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न, र तिनीहरूलाई पृथ्‍वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्‍याउनुभयो’। तपाईं आफ्‍नो भयङ्कर क्रोधलाई शान्‍त गर्नुहोस्‌, र आफ्‍ना मानिसहरूलाई हानी गर्नदेखि आफ्‍नो मन बद्‌लनुहोस्‌।
13 आफ्‍ना दासहरू अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई सम्‍झनुहोस्‌, जुनहरूसित तपाईंले आफ्‍नै नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्‍नुभएको थियो, ‘म तिमीहरूका सन्‍तानलाई आकाशका ताराहरूजस्‍तै बढ़ाउनेछु। मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूका सन्‍तानलाई दिनेछु, र तिनीहरू सधैँसम्‍म त्‍यसको अधिकारी हुनेछन्‌’।”
14 तब आफ्‍ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्‍नो मन बद्‌लनुभयो।
15 अनि मोशा फर्केर आफ्‍ना हातमा गवाहीका दुवै शिला-पाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। ती पाटीहरूमा अगाड़ि र पछाड़ि दुवैपट्टि लेखिएका थिए।
16 ती पाटीहरू परमेश्‍वरका काम थिए। तिनका लेखोट परमेश्‍वरद्वारा खोपेर लेखिएका थिए।
17 यहोशूले मानिसहरू चिच्‍च्‍याएका सुनेर मोशालाई भने, “छाउनीमा त लड़ाइँको सोरजस्‍तो पो सुनिँदैछ।”
18 मोशाले भने, “यो सोर न त जित्‍नेहरूको न हार्नेहरूको हो, तर म त गाउनेहरूको सोर सुन्‍दैछु।”
19 छाउनीनेर आउँदाआउँदै मोशाले बाछो र नाच देखे। मोशालाई साह्रै रीस उठ्यो, र तिनले ती पाटीहरू आफ्‍ना हातले पर्वतको फेदीमा फ्‍याँकेर फुटाइदिए।
20 तब तिनीहरूले बनाएको त्‍यो बाछो लिएर तिनले आगोमा जलाइदिए, र त्‍यसलाई धूलोपीठो पारेर पानीमा छरिदिए। अनि तिनले इस्राएलीहरूलाई त्‍यो पिउन लाए।
21 त्‍यसपछि मोशाले हारूनलाई भने, “यी मानिसहरूले तपाईंलाई के गरे, र तपाईंले यिनीहरूलाई यस्‍तो ठूलो पापमा लानुभयो?”
22 हारूनले जवाफ दिए, “हजूरको रीस ममाथि नउठोस्‌। तपाईं त यी मानिसहरूलाई जान्‍नु नै हुन्‍छ। यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्‌।
23 तिनीहरूले मलाई भने, ‘हाम्रा निम्‍ति हाम्रा अगिअगि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिश्रबाट निकालेर ल्‍याउने मोशालाई के भयो हामी जान्‍दैनौं’।
24 तब मैले तिनीहरूलाई भनें, ‘जस-जसकहाँ सुनका गहनाहरू छन्‌, ती फुकालेर ल्‍याओ’। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए। मैले आगोमा हालिदिएँ, र यो बाछो निस्‍क्‍यो।”
25 मोशाले देखे कि मानिसहरू त छाड़ा भइसकेका थिए, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई छाड़ा हुन दिएका थिए, यतिसम्‍म कि तिनीहरू आफ्‍ना वैरीका सामुन्‍ने हाँसोको कारण बनेका थिए।
26 तब मोशाले छाउनीको ढोकानेर उभिएर भने, “जो-जो परमप्रभुतर्फ छन्‌, तिनीहरू मकहाँ यता आऊन्‌।” अनि लेवीका सारा सन्‍तानचाहिँ तिनीकहाँ आएर भेला भए।
27 मोशाले तिनीहरूलाई भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘तिमीहरू हरेकले आफ्‍नो-आफ्‍नो तरवार भिरेर छाउनीको वल्‍लो छेउदेखि पल्‍लो छेउसम्‍म ढोका-ढोकामा गएर हरेकले आफ्‍नो भाइ र आफ्‍नो मित्र र आफ्‍नो छिमेकीलाई मार’।”
28 तब लेवीका सन्‍तानहरूले मोशाले भनेअनुसार गरे। त्‍यस दिन मानिसहरूमध्‍ये तीन हजार जति पुरुष मारिए।
29 तब मोशाले भने, “आज तिमीहरू आफ्‍ना-आफ्‍ना छोरा र आफ्‍ना-आफ्‍ना भाइलाई नाश गरी परमप्रभुको निम्‍ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष्‌ दिनुभएको छ।”
30 भोलिपल्‍ट मोशाले मानिसहरूलाई भने, “तिमीहरूले ठूलो पाप गरेका छौ। तर अब म परमप्रभुकहाँ उक्‍लेर जानेछु। शायद तिमीहरूको यो पापको निम्‍ति म प्रायश्‍चित गर्न सक्‍छु होला।”
31 अनि मोशाले परमप्रभुकहाँ फर्किगएर यसो भने, “हाय!’ यी मानिसहरूले कस्‍तो ठूलो पाप गरेका छन्‌! तिनीहरूले आफ्‍ना निम्‍ति सुनका देवताहरू बनाएका छन्‌।
32 तापनि तपाईंले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ होला– हुन्‍न भनेता, तपाईंले लेख्‍नुभएको पुस्‍तकबाट मेरो नाउँनिशानै मेटिदिनुहोस्‌।”
33 तब परमप्रभुले मोशालाई भन्‍नुभयो, “जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ, त्‍यसलाई नै म आफ्‍नो पुस्‍तकबाट मेटिदिनेछु।
34 अब जा, मैले तँलाई भनेको स्‍थानमा मानिसहरूलाई अगुवाइ गरेर लैजा, र मेरा दूत तेरो अगिअगि जानेछन्‌, तापनि तिनीहरूलाई सजाय दिने समय आएपछि म तिनीहरूको पापको दण्‍ड दिनेछु।”
35 अनि हारूनले बनाएको बाछोप्रति तिनीहरूले जे गरे त्‍यसैको निम्‍ति परमप्रभुले मानिसहरूलाई रूढ़ीले मार्नुभयो।
Exodus 31 Choose Book & Chapter Exodus 33